Passenger Lezothutho Imigaqo - Abakhweli
Abantwana phantsi ishumi azivumelekanga ukuba utyelele kwi-elide-umgama oololiwe ngaphandle kokuba ekhatshwe i-omdala ngaphandle iimeko pupils okanye abafundi abebezimase namaziko emfundo nge-oololiwe. Ngomhla omnye ticket, i-passenger unako ukuzithwala isandla luggage weighing akukho ngaphezu amathathu anesithandathu kg (okanye amashumi amahlanu kg kwi-carriages kunye u-berth compartments (sleeper carriages) simahla. I isixa kwesandla luggage abathathu imilinganiso kufuneka ingabi zingaphezu cm. Ukongeza kwi-permitted isandla luggage, ngamnye passenger ovumelekileyo ukuba thatha briefcase, handbag, binoculars, skis kwaye ski amachaphaza, fishing rods, ikhamera, umbrella, nezinye izinto ezincinane simahla anike isixa ezintathu imilinganiso akusebenzi zingaphezu anamashumi cm. I-limisele imithetho kwi isandla luggage vumela abakhweli elide kwi-umgama oololiwe ukuthatha prams, kayaks kwaye bicycles ngaphandle motors xa disassembled kwaye bekelela. I-limisele imithetho kwi isandla luggage vumela abakhweli kwi commuter oololiwe ukuthatha lezothutho izityalo, izithole nezinye kokutyala mathiriyali na ukudlula a ubude cm.
Kwiindawo apho restrictive amanyathelo okanye quarantine ikhona, i-passenger kufuneka anike uxwebhu ekhutshwe lisebe Likarhulumente le ngxelo kuba Mzi-Quarantine ukuqinisekisa ezibanzi zezothutho. Abakhweli banokuthatha akukho ngaphezu kwesinye bike kwi-dismantled ifomu kwi-vestibule ka-suburban commuter oololiwe kuba ngaphandle kwentlawulo. Izinto ukuba unako umonakalo okanye contaminate i-carriage okanye abakhweli’ izinto okanye ezinye malodorous, flammable, toxic, flammable, explosive nezinye izinto ezinobungozi * azinako sithathwe njengokuba isandla baggage. Xa bamthwala njengokuba isandla luggage, firearms kufuneka transported unloaded kwi-kunjalo, holster okanye imeko ekhethekileyo kwaye igcine ngokwahlukeneyo ukusuka ammunition. Ngomhla omnye ticket, i-passenger banokuthatha baggage weighing akukho ngaphezu amabini anamashumi kg. Izinto iinjongo azinako transported apho qwalasela ubunzima ngaphantsi kweshumi kg okanye ngaphezulu kwama- kg, okanye ukuba ubude bexesha omnye umlinganiso ngu ngaphezu m. Indivisible izithuba weighing ukusuka kg ukuya kg kunye a ubude omnye measurements akukho ngaphezu m, ezifana refrigerators okanye igesi stoves, ingaba olwamkelekileyo kuba njengoko carriage baggage, kodwa akukho enye into enjalo ovumelekileyo ngamnye lenqwelomoya. Ngasinye ka-baggage kufuneka suitably fitted kuba oqhuba xa kufakwa, ukulayisha kwakhona kwaye unloading. Impahla okanye containers kufuneka uqinisekise nasengqondweni le baggage kulo lonke lezothutho nkqubo. Xa transporting izityalo, izithole nezinye kokutyala mathiriyali njengoko baggage, baya kufuneka packaged ukuba isiqinisekiso, umgaqo-ubuntu ka-ezibanzi zezothutho kwaye hayi contaminate i-baggage kwaye cargo kwezinye abakhweli. Umba ngamnye abe transported kule meko akufunekanga zingaphezu amabini anesihlanu kg kwi-ubude kwaye amakhulu amabini anamashumi cm kwi-ubude, umphakamo okanye ububanzi. Ezinjalo izinto unako kuphela kwamkelwa kuba dispatch ukusuka stations kwiindawo phantsi quarantine ukuba holder ye-quarantine xwebhu lunika iziqinisekiso ukuba s lowo unelungelo lezothutho kokutyala mathiriyali ngokungqinelana limisele imithetho ngaphandle transshipment en route. Federal Passenger Inkampani oololiwe luvumeleke ukuba ukuzithwala zilandelayo isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo, tourist kwaye hunting izixhobo (abantliziyo iyonke ubungakanani kwi-ezintathu imilinganiso ubude x ububanzi x ubude unako zingaphezu cm): a) snowboards, skis kwaye njengokukhapha ski iipali, apho kufuneka ezigcinwe kwi-izithuba kuba ukuzithwala-ngomhla we-luggage okanye kunye abakhweli transporting nabo kwi-carriage kwi-enjalo indlela ngoko ke njengoko hayi ukuphazamisa abanye abakhweli. Akukho imali kuba oqhuba ezi izinto ziya kuba ibe igcwalisiwe ukuba abakhweli.
Akukho weziganeko zeenqanawa amaxwebhu ezifunekayo
b) collapsible kayaks kwaye canoes, collapsible kayaks kwaye paddles ukuba ifakwe i-izithuba kuba ukuzithwala-ngomhla we-luggage okanye kunye abakhweli transporting nabo kwi-carriage kwi-enjalo indlela ngoko ke njengoko hayi ukuphazamisa abanye abakhweli. A umrhumo uya kuba ibe igcwalisiwe nganye canoe (kayak) bamthwala kwi ukuqeqesha ngomhla umyinge kuba baggage weighing amathathu kg c) unmotorized bicycles kwi-dismantled kwaye bekelela ifomu ukuba ifakwe i-izithuba kuba ukuzithwala-ngomhla we-luggage okanye kunye abakhweli transporting nabo kwi-carriage kwi-enjalo indlela ngoko ke njengoko hayi ukuphazamisa abanye abakhweli. A umrhumo uya kuba ibe igcwalisiwe nganye bicycle bamthwala kwi ukuqeqesha ngomhla umyinge kuba baggage weighing ishumi kg d) hunting kwaye sporting guns bamthwala unloaded kwilixa, holsters okanye ekhethekileyo oqhuba iimeko kwaye ngokwahlukeneyo ukusuka ammunition wabeka kwi-izithuba kuba ukuzithwala-ngomhla we-luggage. A umrhumo uya kuba ibe igcwalisiwe nganye iyunithi kwaye izinto ezongezelelwayo transported kwi ukuqeqesha ngomhla umyinge kuba baggage weighing ishumi kg Ingqalelo. Ukususela amabini anesihlanu Meyi ukuya amabini anesihlanu julayi, ezibanzi zezothutho kwaye oqhuba ka-izikhali kwaye ammunition kwi oololiwe ukuba izixeko ukusingatha Indebe Yehlabathi ii-intshi kwaye zahlukeneyo name squads ngu prohibited: Anapa, Volgograd, Voronezh, Grozny, Yekaterinburg, Kubalulekile, Kazan, i-kaliningrad, Kaluga, Krasnodar, Moscow, Nizhny Novgorod, Rostov-kwi-Musa, i-samara, St.
Marengo, Saransk, Settlors kwaye Togliatti
Oku prohibition kwenziwa ngokungqinelana isirashiya ye-ofisi kamongameli Ummiselo Ongunombolo»Kwi-ukusetyenziswa Inyusiwe Ukhuseleko Amanyathelo ngexesha FIFA World Cup kwaye FIFA Confederations Indebe Championship kwi-isirashiya»ebhalwe ithoba Kucanzibe ngowama. e) isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo iipali transported kwi-compartment carriages kwaye carriages nge berth compartments (iyalalaprocess status compartment). Iipali kufuneka iqinisiwe kunye kwaye wabeka uniformly noku casing ye-heating imibhobho kwi-corridor ezinjalo ukuze babe musa interfere kunye lokwaluka ka-abakhweli noku corridor. Isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo iipali inako kuphela ifakiwe kwi-ukuqeqesha departure sovavanyo kwaye intermediate stations apho ukuqeqesha misa kuba ubuncinane kwimizuzu emihlanu ukususela eliphezulu iqonga nge window kwi corridor icala carriage. Iipali kusenokuba unloaded kwi indawo sovavanyo kuphela emva kokuba bonke abakhweli kuba lokuqala ngokupheleleyo disembarked ukususela carriage. A umrhumo uya kuba ibe igcwalisiwe nganye kwipali bamthwala kwi ukuqeqesha ngomhla umyinge kuba baggage weighing ishumi kg. Akukho ngaphezu ezimbini isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo iipali kusenokuba transported ngomhla omnye lenqwelomoya. I-conductor ye-passenger carriage apho isebe lemicimbi yenkcubeko nemidlalo iipali ingaba transported linoxanduva ikhangela kufakwa kwaye unloading ye-iipali. Booking i-weziganeko zeenqanawa amaxwebhu anjalo izixhobo kusenokuba bamthwala ngaphandle ukususela ngomhla xa tickets kuba lezihlalo kwi ukuqeqesha yiya kwi ziyathengiswa, kwaye phambi departure, kungakhathaliseki umhla xa i-passenger buys i-lenqwelomoya. Ngomhla we-suburban commuter oololiwe, skis kwaye zabo njengokukhapha ski iipali kusenokuba bamthwala simahla xa iyonke zabo ezintathu imilinganiso zingaphezu cm kubonelelwa, bamele ezigcinwe kwi-isithuba alungiselelwe ukuzithwala-ngomhla we-luggage. Kuphela into enye ka-skis unako kuthatyathwa kwi omnye lenqwelomoya. A intlawulo yi-ibe igcwalisiwe kuba oqhuba skis kwi zokusebenza indawo serviced yi-zilandelayo suburban commuter iinkampani: Central Suburban Passenger Inkampani, Bashkortostan Suburban Passenger Inkampani kwaye Transbaikal kaya Suburban Passenger Inkampani. Skis kusenokuba bamthwala simahla ukusuka kwesinye disemba ishumi Matshi kwi zokusebenza indawo serviced yi-Emntla-Ntshona Suburban Passenger Inkampani. Abakhweli ubungqina i-sole uxanduva ukuqinisekisa imfezeko kunye nokhuseleko lwabo baggage kwaye luggage. Ukongeza eqhelekileyo imali evunyelweyo kuba isandla luggage, zonke iindidi ezincinane pets, izinja kunye iintaka kusenokuba transported kuzo zonke carriages (ngaphandle kokuba carriages kunye u-berth compartments (iyalalaprocess status carriages) kwaye deluxe carriages) ukuba sempilo sezilwanyana iyafumaneka kwaye ngaphandle kwentlawulo ufumana imali kuba ezibanzi zezothutho ngokungqinelana kwisiqendu ka-Imigaqo kuba Transporting Abakhweli, Baggage kwaye Luggage kwi-Federal Railways. Ezincinane pets, izinja kunye iintaka kufuneka transported kwi-iibhokisi, baskets, cages okanye containers, apho kufuneka kufakwa kwi-izithuba esele yenzelwe accommodate isandla luggage. Umnini uya kuba materially netyala kuba ezibanzi zezothutho ezincinane pets, izinja kunye iintaka ngaphandle kwentlawulo ngokungqinelana nomgaqo-umthetho we-isirashiya. Abanini-mhlaba ezincinane pets, izinja kunye iintaka, okanye abo njengokukhapha kwabo, uthobele carriage u-sanitary regime xa transporting izilwanyana. Kubalulekile akavumelekanga ukuba ukuzithwala wild izilwanyana njengokuba isandla luggage kwi oololiwe kunye carriages zonke iindidi. Isebenza izinja kusenokuba transported, ngaphandle kokuba ngabo muzzled kwaye kwi leash, kweyahlukileyo compartment a compartment carriage phantsi kolawulo lwabo abanini-mhlaba okanye njengokukhapha abakhweli ukubhatala ngokupheleleyo iindleko zonke lezihlalo kwindlu compartment ngaphandle intlawulo eyongezelelweyo ngenxa yabo ezibanzi zezothutho. Inani izinja zabo kwaye abanini-mhlaba okanye njengokukhapha abakhweli kwi-compartment akufunekanga zingaphezu inani lezihlalo kwindlu compartment. Kwi-suburban commuter oololiwe, esenza izinja unako transported phantsi kolawulo lwabo abanini-mhlaba okanye njengokukhapha abakhweli phezu intlawulo yabo ezibanzi zezothutho. I-ezibanzi zezothutho ka-inkulu kwaye isebenza izinja kwi-suburban commuter oololiwe ngu ibe igcwalisiwe ngokungqinelana nomgaqo-Imigaqo iqaphele ngasentla. Ezincinane pets, izinja, iintaka kwaye iinyosi kusenokuba transported kwi-baggage imoto ngaphandle transshipment en route. Izilwanyana kufuneka transported ngendlela ekhethekileyo containers okanye containers kunye iitreyi (baskets, cages, crates) kwaye sikhuselwe ngokuchasene umonakalo kwaye injury kwaye izakhono i-carriage kwaye baggage kwi-baggage car.
Lo mphathi akanaxanduva lesondlo izilwanyana
Pets ingaba olwamkelekileyo kuba ezibanzi zezothutho kwi-baggage car apho baya kuba bamthwala akukho kamva kunokuba ngeyure enye phambi ukuqeqesha departure. A baggage kokuba zifunyenwe ngenxa yabo ezibanzi zezothutho ngu ekhutshwe. Ukuba baggage kokuba zifunyenwe ilahlekile, izilwanyana zibe zinikezelwe ukuba umamkeli kwi-ntetho ka-isazisi kwaye ubungqina bokuba le baggage ngowethu kuye yakhe. Izilwanyana kufuneka yesebe eqokelelweyo kwi indawo sovavanyo ngokukhawuleza phezu arrival ye-ukuqeqesha ngomhla apho babesele transported, kodwa akukho kamva kunokuba elinesibini iiyure emva ukuqeqesha ke arrival. Ukuba yezilwanyana ayikho yesebe eqokelelweyo, railway inkampani linelungelo ukuba alahle ngayo ngendlela emiselwe
Evicted ukusuka apartment - Russian uguqulelo - Russian abaqondisi-mthetho